Gabdhaha Bush oo waraaq u qoray gabdhaha Obama | Kobciye24.com
“Malia iyo Sasha siddeed sano ka hor maalin uu qabaw jiro oo bishii Nofembar ka mid ah waxaan idinku salaanay albaabka Aqalka Cad. Waxaa indhihiina ka muuqday farxad iyo in aad rabteen in aad wax ka ogaataan gurigiina cusub.
“Waxaan wakhti hore ka soo tagnay shaqooyin kanagii Baltimore iyo New York waxaana u safarnay magaalada Washington si aan idiin kala barno Aqalka cad.
In aan idin tusno guriga jiifka ee Lincoln iyo sariirihii mar ahaa kuwanagii, si aan idiin barno dadka oo dhan, kuwa ubaxyada ka shaqeeya, kuwa beeraha iyo qaab dhismeedka kale ee dhulka ka shaqeeya iyo shaqaalaha kale ee noloshooda galiyay in dhismahan taariikhiga ah uu noqdo guri”.
“Afarteenuba waxaan si tartiib ah u dhex lugaynay hoolalka cajiibka ah ee ku yaalla gurigaas oo aad ku qasbanaydeen in aad u soo wareegtaan
“Sideed sano ka dib wax badan ayaa idiin qabsoomay. Wax badanna waad aragteen.
“Waxaad istaagteen Albaabada xabsiga Robben Island halkaas oo uu tobannaan sano ku xirnaa Nelson Mandela-ha Koonfur Afrika, idinkoo aabihiin idin ag taagan yahay.
“Waxaad u socdaaasheen Liberia iyo Morocco idinkoo hooyadiin la socda si aad ula hadashaan gabdho uguna sheegtaan ahmiyadda waxbarashada – gabdhahaas oo iyaguna idin arkay, waalidkiinna arkay, kuwaas oo arkay cidda ay noqon karaan haddii ay aqoonta sii wataan oo ay wax bartaan.
“Waxaad ka qayb gasheen cashooyin ay xukuumaddu samaysay, waxaad la kulanteen hogaamiyeyaasha caalamka, waxaana idiin suuragashay in aad ku qosashaan kaftankii uu aabihiin ka jeediyay xafladda sanad laha ah ee Aqalka Cad ka dhacda ee loo yaqaanno Thanksgiving turkey pardon, idinkoo carruur ahna waxaad dhigateen iskuul waxaadna yeelateen asxaab.